Masinina fipoahana mitifitra dia teknolojia fanodinana izay ny fitifirana ary tsy voatanisa dia voatifitra ary misy fiantraikany amin'ny haben'ny haingam-pandeha amin'ny alàlan'ny milina famaohana. Raha ampitahaina amin'ny teknolojia fitsaboana hafa eto an-tany dia haingana kokoa, mahomby kokoa izy io, ary azo tazonina na voahidy amin'ny ampahany amin'ny fizotran'ny fanariana.
Tamin'ny taona 1930, orinasa amerikana iray no nanao ny milina fanapoahana voalohany eran-tany. Ny famokarana fitaovam-pitrandrahana fitifirana tifitra any Shina dia nanomboka tamin'ny taona 1950, izay naka tahaka indrindra ny haitao an'ny Firaisana Sovietika teo aloha.
Ny milina fipoahana fitifirana dia azo ampiasaina ihany koa hanala ireo burrs, diaphragma ary harafesina, izay mety hisy fiantraikany amin'ny fahamendrehana, endrika, na famaritana ny ampahany amin'ilay zavatra. Ilay milina fipoahana fipoahana dia afaka manaisotra ireo loto ao anaty koa amin'ny faritra misy sosona ary manome ny mombamomba azy io izay mampitombo ny firafitry ny fonosana hahatratra ny tanjon'ny fanamafisana ny sangan'asa.
Masinina fipoahana mitifitra dia tsy mitovy amin'ny tifitrapeening machine satria izy io dia ampiasaina hampihenana ny ain'ny havizanana amin'ny ampahany, hampitombo ny tsindry amin'ny endriny samihafa, hampitombo ny tanjaky ny faritra, na hisorohana ny fikororohana.
Misimisy kokoa, tsidiho azafady www.dx-blast.com
Fotoana fandefasana: Aug-20-2021